4 Matipi Ekugadzira Yakabudirira Vhidhiyo Kushambadzira Siti kune rako Bhizinesi | Martech Zone
Haisi chakavanzika chekuti kushandiswa kwevhidhiyo mukushambadzira zvemukati kuri kuwedzera. Mumakore mashoma apfuura, vhidhiyo yepamhepo yakaratidza kuve inonyanya kuita uye inomanikidza fomu yezvinyorwa zvevashandisi. Zvemagariro midhiya rave rimwe remapuratifomu anonyanya kushambadzira evhidhiyo, uye ichokwadi icho chisingafanirwe kutorwa zvishoma. Tine mamwe matipi akakosha kwauri ekuti ungagadzire sei mavhidhiyo anoshanda anotora pfungwa dzevateereri vako kuti vazopedzisira vatora matanho.
1. Gadzira mavhidhiyo ekugadzira anotungamira
Kusiyana newe, vako vangangove vatengi havasi kufunga nezve zvigadzirwa kana masevhisi zuva rese kunge iwe. Pane kudaro, vane zvido zvavo uye ajenda. Kuti uite kuti vangangove vatengi vamire uye vatarise, iwe uchafanirwa kuita kuti zvemukati zviratidzike kwavari.
Vanhu vanoda uye vanorangarira nyaya. Nyaya yakanaka ine kupokana kwakajeka uye kugadzirisa kunogutsa. Kana iwe uchikwanisa kuamisa bhizinesi rako uchishandisa nyaya ine dambudziko repamutemo uye mhinduro inoshanda, vanhu vanowanzo teerera meseji yako zvizere uye nekurangarira zvaunofanira kupa.
2. Tora mavhidhiyo ako awanikwe uye anyore zvirinani pane Youtube
Kuisa vhidhiyo hakuna kukwana. Kuti uwane mamwe maonero uye ubudise mhedzisiro, unofanirwa kutaurira Youtube kuti vhidhiyo yako ndeyei uye ndeapi tarisiro vateereri vanozoifarira. Kugadziridza vhidhiyo kunokupa iwe mukana wekuti mavhidhiyo ako aratidzwe uye zvemukati zvirimo zvinowanikwa nevanhu chaivo. Saka kana iwe uchida kuwana akawanda maonero, vanyoreri uye traffic kubva kuYouTube, tevera aya akareruka matipi:
Ziva ako mazwi akakosha uye ita shuwa kuti iwe unogonesa yako yeYouTube zvemukati kwavari.
Nyora chinyorwa chipfupi, chinonakidza, uye chinogombedzera icho chinotsanangura muchidimbu kuti vhidhiyo yako ndeyei. Musoro unofanirwa kusanganisira ako akanangwa mazwi akakosha.
Nyora tsananguro yakadzama inotaurira vateereri vako nei vhidhiyo yako yakakosha kutarisa uye kuona kuti inosanganisira mazwi ako. Ziva kuti chete matatu ekutanga mitsara anoonekwa paYouTube pasina kubaya iyo RATIDZA ZVAKAWANDA link, saka chero zvinongedzo uye kufona kuzviito zvinofanirwa kuiswa kumusoro.
Wedzera akakodzera ma tag uye mapoka. Izvi zvinobatsira Youtube kuratidza yako vhidhiyo seyakakurudzirwa vhidhiyo kana vashandisi vari kutarisa akafanana mavhidhiyo.
Wedzera tambo yemavhidhiyo yeiyo vhidhiyo inoenderana neyako mhando kuitira kuti vateereri vako vakwanise kuona ako mavhidhiyo.
Sanganisira zvinyorwa zvidiki uye zvinyorwa zvakavharwa. Izvi zvinowedzera yako Youtube SEO uye zvichave nyore kune vaoni kuti vatarise munzvimbo ine ruzha kana isina ruzha.
Kurudzira mhinduro, makomendi, uye mibvunzo. Izvi zvinopa yako chiteshi masimba uye zvinokubatsira iwe kuvaka nharaunda.
Wedzera Youtube yemuno End Screens pakupera kwevhidhiyo. Izvi zvinokubatsira iwe kusimudzira zvirimo, chiteshi, uye kunyange kutyaira traffic kune yako webhusaiti.
3. Gadzira kuziva uye kutyaira traffic
Vhidhiyo Teasers yakagadzirirwa kubata vateereri uye kukurudzira kuda kuziva. Vakabudirira vanopa kuravira chete kwezvichauya kuitira kuti vanhu vafarire kugamuchira rumwe ruzivo. Mazuva ano, Yemagariro Media inopa inokurumidza uye yakapusa nzira yekuwana yakawanda ruzivo kunze uko nezve zvigadzirwa zvako kana masevhisi mune inguva pfupi yenguva. Kugovera mavhidhiyo emateya inzira inoshanda yekubata vateereri vako uye kuvakoka kuti vashanyire webhusaiti yako kune mamwe mavhidhiyo akadzama neruzivo. Izvi zvinokubatsira iwe kudzidzisa yako tarisiro, kugadzira mamwe akakodzera anotungamira uye kuwedzera yako yekuvhara mwero.
4. Kuyera uye Kudzora
Iye zvino zvawakavhura vhidhiyo yako, unofanirwa kunyatso kuyera mashandiro evhidhiyo yako yemukati. Uye nepo mavhidhiyo ekuona ari iwo angangotariswe nevashambadzi pakutanga, haisi iyo nguva dzose nzira yakanakisa yekuyera kuti vhidhiyo yako irikuita sei.
Izvo zvese nezve chako chinangwa!
Kuisa vhidhiyo zvinangwa inofanirwa kuve yako yekutanga nhanho. Izvi zvinokupa iwe kutungamira kunodiwa kuti utarise chete pane iyo data yaunoda uye kudzivirira kutambisa nguva pane zvisina basa ruzivo. Chii chauri kutarisira kuwana? Ndeipi yako yekutanga kushambadzira chinangwa chemushandirapamwe uyu? Iwe unoda kuzivisa, kubatsira kuita sarudzo, kana kukurudzira chiito?
Kubva pane izvo, iwe unogona kuona kuti ndeapi metric anoshanda kune yega chinangwa.
Zvino, ngatione kuti ndeapi metric aunogona kushandisa kwauri zvinangwa:
Yese Inotamba - Iyi ndiyo metric yakapusa asi inonyengera kupfuura zvese. Yese mitambo inokuratidza iyo yakasvibirira nhamba yevanhu vakadzvanya bhatani rekutamba pavhidhiyo yako zvisinei nekuti vakareba vhidhiyo yakadii. Kunyangwe ichi metric iri yakanaka kuyera kusvika, haugone kuona kuti inoshanda sei uye kubatanidza vhidhiyo yako.
Mutambo Wekutamba - Mutambo weKutamba ndiyo muzana yevashanyi vepa peji vakadzvanya bhatani rekutamba ndokutanga kuona vhidhiyo yako. Mutambo wekutamba unoverengwa nekutora iyo yakazara nhamba yemitambo uye nekuigovanisa iyo nenhamba yevhidhiyo mitoro. Izvi zvinokubatsira iwe kuona kana vhidhiyo yacho yakamisikidzwa munzvimbo chaiyo uye inokwezva sei vhidhiyo thumbnail yako. Kana iwe uri kuwana yakaderera yekutamba mitengo, iwe ungangoda kufunga kuisa yako vhidhiyo munzvimbo ine mukurumbira nzvimbo, ichiita iyo yakadzamidzirwa vhidhiyo yakakura, uye kuva neinonyanya kubatika thumbnail.
Engagement Rate - Kubatanidzwa kunokuratidza huwandu hwevateereri vako vanoona, uye hunoratidzwa sepesenti. Ichi ndicho chiratidzo chikuru chinokuudza kuti vhidhiyo yako inobatsira sei uye inonakidza kune vanoiona uye inogona kukubatsira kuti uone panguva iyo vataridzi vako vanotanga kurasikirwa nechido uye kuti ndezvipi zvikamu zviri kubvutwa. Izvi zvakare zvinokubatsira iwe kuisa mafoni-kune-ekuita mabhatani uye zvimwe zvinhu zvinofambidzana zvine hungwaru panguva yevhidhiyo.
Social Sharing - Kugovana Kwemagariro kunoratidza mashandisiro anoita vhidhiyo yako zvemukati mezvenhau venhau. Kugovera zvemukati kunotungamira kune akawanda mavhidhiyo ekuona, kusvika kune vateereri vatsva, uye zvinogona kukubatsira iwe kuona kuti vafarire vateereri vako nezve yako zvemukati uye brand.
Shanduro Yekutendeuka - Shanduko ndiyo nhamba yezviito zvakatorwa panguva kana mushure mekuona vhidhiyo. Izvi zvinogona kuve maCTA uye zvirevo zvakadzvanywa, zvinotungamira zvinogadzirwa, uye nezvimwe. Iyi metric idiki isinganzwisisike kuteedzera, uye iwe ungangoda inoda yakatsaurwa yevhidhiyo mutambi seWistia, Vidyard kana Yekutema Vhidhiyo yekuwedzera kutsanangurwa kwezviitiko. Shanduro Yekutendeuka yakakosha metric inoshandiswa kuyera iyo ROI iyo yako mavhidhiyo ari kugadzira.
Unoda kudzidza zvakawanda nezvekuti vhidhiyo ingabatsira sei kutanga yako yekushambadzira?
Taura nesu izvozvi yemahara Vhidhiyo Kushambadzira Kubvunza.
Please shanyira yedu Youtube Chiteshi kune mamwe mavhidhiyo Matipi ane chokwadi chekusimudzira ako ekushambadzira macampaign.
Tags: imba4 midhiyamumba4mediavhidhiyo kuzivakutendeuka kwevhidhiyovhidhiyo kubatanidzwamavhidhiyo mazwivhidhiyo kushambadziravhidhiyo kushambadzira zanomavhidhiyo metricsoptimization yevhidhiyovhidhiyo yekutamba mwerovhidhiyo inotambavhidhiyo kugovanayoutube zano
Kutenda nekugovana matipi. Ndiri kushandisa izvi kuti vamwe vanzwisise.